Soo ogow sidaad bisad ugu quudin lahayd malta | Bisadaha Noti
Sida bisad loo quudiyo malta
Bisaduhu waa xayawaan aad u nadiif ah; runti, iyagu aad ayey u xun yihiin oo waxay umuuqdaan kuwo ku mashquulsan nadaafaddooda shaqsiyadeed. In kasta oo tani ay leedahay sababteeda: iyagu waa ugaarsadeyaal, laakiin sidoo kale waxay ugaadhsadaan xayawaannada kale ee waaweyn iyo kuwa ka xoogga badan, sidaa darteed in aan la dareemin ma aha inay muhiim tahay, ee waa inay badbaadin karto noloshooda.
Markay nalala noolaanayaan maahan inay ka walwalaan khataraha noocan ah maxaa yeelay ma jiraan (ama ma jiri karaan), laakiin taasi waxay ubaahantahay nadiif ahaansho waxay ukeeneysaa faa iidooyin kale: kuwa malt. Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay tahay iyo sida malt loo siiyo bisad? Sii wad akhriska 😉.
1 Waa maxay mukulaal?
2 Maxay tahay?
3 Sideen kuu siiyaa?
Waa maxay mukulaal?
Waa a waxsoosaarka asalka khudradda oo u eg midab malab, inkasta oo leh cufnaanta cufan oo ka kooban soosaarida malt, fiber, waxyaabaha laga helo caanaha, saliidaha khudradda iyo dufanka, iyo khamiirka. Waxay sidoo kale inta badan ka kooban tahay midabbo, fiitamiino, iyo walxaha ilaaliya.
Waxaan ka heli doonnaa iib ahaan qaab tuubo dabool leh, dukaan kasta oo xayawaan ah iyo xitaa dukaamada waaweyn.
Bisaduhu, inta ay maalin walba is-qurxinayaan, waxay cunaan qadar badan oo timo dhintay ah oo loo jiheyn doono habka dheef-shiidka. Marka qadarkaasi xad-dhaaf yahay, kubbadaha timaha ama trichobezoars ayaa la sameeyaa. Sidoo kale, xayawaanku waxay u baahan karaan caawimaad dheeri ah si ay uga saaraan kubbadahaas, iyo waxa ka wanaagsan in iyaga la siiyo malt iskana ilaali astaamaha dhibta leh ee aan fiicnayn sida matagga, lallabbada ama saxarada oo ku adkaata.
Sideen kuu siiyaa?
Si aad u quudiso bisadaha malt waa inaad xoogaa yar (sida kubbadda u eg yicib) u dhigtaa lugtooda oo aad keligaa iska daysaa. Caqli ahaan way is leefleefi doonaan. Guud ahaan, iyagu waxay jecel yihiin, laakiin haddii aad ogaato inay ka jecel yihiin nooc ka badan kan kale, waa caadi 🙂. Mid kastaa wuxuu leeyahay halabuur xoogaa ka duwan, laakiin waxa muhiimka ah, ee ku jira soosaarida malt, dhammaantood waa isku mid.
Haa runtii: sii toddobaadkii laba jeer, ama afar haddii ay timo dhaadheer leeyihiin. Inta lagu jiro daadinta timaha, waxaad siin kartaa iyaga maalin kasta, hal mar.
Ma u baahan tahay macluumaad dheeri ah? Halkan guji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Sida bisad loo quudiyo malta
Waa maxay beerka dufanka badan ee bisadaha maxaase lagu daaweeyaa?
Sidee loo ogaadaa in bisadaydu iska soo ridday